Soosaarayaasha Jack Dhalada Haydarooliga ah,Alaab-qeybiyeyaasha Korantada Porta | EPONT Jack
Guriga > Alaabta > Dhalada Haydarooliga
EPONT Jack waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha Porta Power Jack, waxaan soo saareynaa noocyo kala duwan oo Porta Power Jack alaab tayo fiican leh oo leh hufnaan iyo saxnaan gaar ah. Alaabtayadu waxay u hoggaansamaan shuruudaha kala duwan ee warshadaha laga soo bilaabo tobanaan sano, waxaan kor u qaadnay qalabkayada wax soo saarka iyo awoodaha maareeyayaasha aqoonta leh, injineerada iyo sidoo kale farsamoyaqaannada. Sifooyinka tayada leh iyo kuwa waara ee Porta Power Jack waa mid amaan mudan oo ay qadarinayaan macaamiisheena ku kala sugan qaybaha kala duwan ee suuqa. Badeecadaha kala duwan ayaa si fiican ugu habboon macaamiisha sababtoo ah Porta Power Jack ee aan bixinay waxaa loo keenay si loo qanciyo shuruudaha kala duwan ee macaamiisha. Waxaan hubineynaa in qiimaha adeegyadeena uu yaraado.
Dhalada Haydarooliga caadiga ah. Ma jirto wax diidmo ah in badeecadani ay saameyn togan ku leedahay niyadda waxayna bixisaa nasasho, gaar ahaan hurdo la'aanta iyo madax xanuunka. Alaabtu waxay leedahay tayada dusha sare ee weyn. Burburinta dusha sare ma noqon doonto mid si fudud u nugul xirashada sida dildilaaca, godadka, godadka ama xitaa jaban. Sariiraha noocan oo kale ah waxay qofka ka caawinayaan inuu si fiican u seexdo habeenkii, taasoo ka caawisa inay wanaajiso xusuusta iyo kor u qaadida awoodda wax-saarista.EPONT Introto Conventional Hydraulic Dhalo Jack EPONT, Our alaabta waxaa inta badan loo dhoofiyo in ka badan 30 waddan sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo iwm. baabuurta, forklift iyo mishiinada dhismaha, waxaan horeba iskaashi la yeelannay in ka badan 10 ka mid ah 500 ee shirkadood ee ugu sarreeya adduunka oo ah mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha.
Jumlo Double Ram Hydraulic Bottle Jacks oo leh qiimo wanaagsan - EPONT
EPONT Double Ram Hydraulic Jack Bottle Jack ee Isticmaalka BaabuurkaWaxaan nahay Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. -- EPONT, alaabadayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 wadan sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo iwm. Macaamiishayada waxaa ku jira kuwo badan. Macaamiisha OEM ee ku takhasusay tareennada, baabuurta, fargeeto iyo mishiinnada dhismaha, waxaanu hore ula yeelanay iskaashi in ka badan 10 ka mid ah shirkadaha ugu sarreeya adduunka ee 500 oo ah mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha.
dhalada jaakadda 32T
Dhaladayada 32T, waa tayada ugu sareysa, alaabtu waxay dhaaftay CE, GS& Shahaadada TUV ee Midowga Yurub. Tayada alaabtayadu waa run oo la isku halayn karo. Si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa suuqyada Yurub iyo Ameerika. Dhammaan alaabooyinka waxay qaataan rinjiyeynta ilaalinta deegaanka ee elektrostatic iyo - 45 ° saliid hydraulic, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa meelaha aadka u qabow. Fadlan nagu kalsoonow. Haddii aan doorano epont, waxaan sii wadi doonaa inaan sameyno si ka sii wanaagsan oo ka sii wanaagsan
jaakadda dhalada hawada cusub
jaakadda dhalada hawada cusub, Alaabadayadu waxay dhaafeen CE, GS& Shahaadada TUV ee Midowga Yurub. Tayada alaabtayadu waa run oo la isku halayn karo. Si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa suuqyada Yurub iyo Ameerika. Dhammaan alaabooyinka waxay qaataan rinjiyeynta ilaalinta deegaanka ee elektrostatic iyo - 45 ° saliid hydraulic, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa meelaha aadka u qabow. Fadlan nagu kalsoonow. Haddii aan doorano epont, waxaan sii wadi doonaa inaan sameyno si ka sii wanaagsan oo ka sii wanaagsan
Qalabka alxanka Haydarooliga 50TEPONT Best Hydraulic welding jack 50T Supplier,Shirkadu waa ururinta wiish kala duwan oo engine ah, Dabaqa Jack 3T, Floor Gudbinta Jack kaas oo ah shirkad gaar ah oo jirka u qaabilsan cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta.
EPONT Best Conventional Haydarooliga dhalada jack Supplier,Shirkadu waa ururinta Crane kala duwan ee Engine, Floor Jack 3T, Floor gudbinta Jack kaas oo ah jirka ku takhasusay cilmi-baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta.
Dhalada Haydarooliga caadiga ah
Dhalada Haydarooliga caadiga ah.Ma jirto wax diidmo ah in badeecadani ay saameyn togan ku leedahay niyadda waxayna bixisaa nasasho, gaar ahaan hurdo la'aanta iyo madax xanuunka.Alaabtu waxay leedahay tayada dusha sare ee weyn. Burburinta dusha sare ma noqon doonto mid si fudud u nugul xirashada sida dildilaaca, godadka, godadka ama xitaa jaban.Sariiraha noocan oo kale ah waxay qofka ka caawinayaan inuu si fiican u seexdo habeenkii, taasoo ka caawisa inay wanaajiso xusuusta iyo kor u qaadida awoodda wax-saarista.
jaakadda dhalada ee GS 20T
Dhaladayada 20T , waa tayada ugu sareysa, alaabadu waxay dhaaftay CE, GS& Shahaadada TUV ee Midowga Yurub. Tayada alaabtayadu waa run oo la isku halayn karo. Si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa suuqyada Yurub iyo Ameerika. Dhammaan alaabooyinka waxay qaataan rinjiyeynta ilaalinta deegaanka ee elektrostatic iyo - 45 ° saliid hydraulic, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa meelaha aadka u qabow. Fadlan nagu kalsoonow. Haddii aan doorano epont, waxaan sii wadi doonaa inaan sameyno si ka sii wanaagsan oo ka sii wanaagsan
dhalada jaakadda 16T
dhalada jack 16T, Our alaabta ayaa ka gudbay CE, GS& Shahaadada TUV ee Midowga Yurub. Tayada alaabtayadu waa run oo la isku halayn karo. Si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa suuqyada Yurub iyo Ameerika. Dhammaan alaabooyinka waxay qaataan rinjiyeynta ilaalinta deegaanka ee elektrostatic iyo - 45 ° saliid hydraulic, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa meelaha aadka u qabow. Fadlan nagu kalsoonow. Haddii aan doorano epont, waxaan sii wadi doonaa inaan sameyno si ka sii wanaagsan oo ka sii wanaagsan
Alaabta alxanka ee ugu fiican alaab-qeybiyaha dhalada haydarooliga
Yipengjack waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha Porta Power Jack, waxaan soo saareynaa noocyo kala duwan oo Porta Power Jack alaab tayo fiican leh oo leh hufnaan iyo saxnaan gaar ah. Alaabtayadu waxay u hoggaansamaan shuruudaha kala duwan ee warshadaha laga soo bilaabo tobanaan sano, waxaan kor u qaadnay qalabkayada wax soo saarka iyo awoodaha maareeyayaasha aqoonta leh, injineerada iyo sidoo kale farsamoyaqaannada. Sifooyinka tayada leh iyo kuwa waara ee Porta Power Jack waa mid amaan mudan oo ay qadarinayaan macaamiisheena ku kala sugan qaybaha kala duwan ee suuqa. Badeecadaha kala duwan ayaa si fiican ugu habboon macaamiisha sababtoo ah Porta Power Jack ee aan bixinay waxaa loo keenay si loo qanciyo shuruudaha kala duwan ee macaamiisha. Waxaan hubineynaa in qiimaha adeegyadeena uu yaraado.